झापा ५ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली दोब्बर मतले बिजयी, को हुन केपी ओली ? – Vision Khabar
झापा ५ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली दोब्बर मतले बिजयी, को हुन केपी ओली ?
। २४ मंसिर २०७४, आईतवार १६:०५ मा प्रकाशित
झापा । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झापा ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा बिजयी भएका छन् । ओली ५७ हजार १ सय ३९ मत ल्याउँदै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा बिजयी भएका हुन् । यो निर्वाचनमा अहिलेसम्म विजयी उम्मेदवारले ल्याएको मत मध्ये ओलीको मत सर्बाधिक हो । उनका निकटम प्रतिद्वन्द्वी खगेन्द्र अधिकारीले २८ हजार २ सय ५७ मत ल्याए ।
को हुन केपी शर्मा ओली ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा (केपी) ओलीको जन्म २००८ साल फागुन ११ गते भएको हो । एमाले संसदिय दलका नेता समेत रहेका ओली नेपालको ३८ औं प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो । २०७२ असोज २४ गते नेपालको ३८ औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वा्चित हुनु भएको थियो ।
त्यसअघि उहाँ गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीसमेत हुनु भएको थियो । ओली २०४८ सालमा झापा क्षेत्र नम्बर ६ र २०५९ सालमा झापा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वा्चित हुनु भएको थियो । ओली २०५१ सालदेखि २०५२ सालसम्म गृहमन्त्री हुनुभयो । २०६४ देखि २०६५ सम्म ओली उपप्रधान एवम् परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो ।
ओलीको जन्म तेह्रथुम जिल्लाको इवा गाउँमा भएको थियो । उहाँका बाबु मोहनप्रसाद ओली र आमा मधु ओली हुन् । २०२२ सालमा कम्युनिष्ट राजनीतिमा लागेका ओलीले २०२६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिनु भएको थियो । २०२८ सालको झापा आन्दोलनका प्रमुख मध्येका एक हुनुहुन्थ्यो ।
त्यही वर्ष उहाँ जेल पर्नुभयो । ओली तत्कालिन नेकपा (माले) को संस्थापक नेता समेत हुनुहुन्छ । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको संंघर्षका क्रममा ओलीले २०२८ देखि २०४४ सम्म १४ वर्ष जेल जीवन बिताउनु भएको छ ।
ओली २०४८, २०५१ र २०५६ को आम निर्वाचनमा झापा जिल्ला क्षेत्र नं ६ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वा्चित हुनु भएको थियो । पहिलो संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा भने उहाँ झापाको क्षेत्र नं ७ बाट पराजित हुनुभयो । २०४९ सालमा नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटी सदस्य भएका ओली २०७१ असारमा पार्टीको अध्यक्ष निर्वा्चित हुनुभयो ।
दोश्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा उहाँ झापा क्षेत्र नं ७ बाट निर्वा्चित हुनुभयो । हाल उहाँ नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ । झापामा विद्यालय जीवन सुरु गरेर ओलीले कक्षा ४ सम्मको अध्ययन गाउँमा पूरा गर्नु भएको थियो । ओलीले झापाको आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट २०२८ सालमा प्रवेशिका परिक्षा एसएलसी उत्तिर्ण गर्नु भएको थियो ।
भाषण गर्दा उखान–टुक्कालाई प्रयोग गर्ने बानीका कारण उहाँको भाषण धेरैले रुचाउँछन् । ओली हाल भक्तपुरको बालकोटमा बस्दै आउनु भएको छ ।